Windows7မှာ Alpha Zaw-gyi မ ပေါ်ဘူး - MYSTERY ZILLION
Windows7မှာ Alpha Zaw-gyi မ ပေါ်ဘူး
December 2009 edited March 2011 in Windows 7
Windows7မှာ Alpha Zaw-gyi မ ပေါ်ဘူး။ လုပ်ကြပါဦး ။ :77::77::77:
Detail လေးရေးပေးပါလား၊ ဘယ် Version သုံးပြီး ဘယ်လို Error တက်တာလဲဆိုတာ။
Windows7မှာ က Alpha Zawgyi 2008 version တွေ နဲ့ တင် အဆင်ပြေပါတယ ်ခင်ဗျ. ဘယ်လို အဲရာ တက်လဲ မသိဘူးနော်...
ဒီထဲက နောက် ဆုံး ဗား ရှင်း နဲ့ ပြန်ထည့်ပြီး သုံးကြည့်ပါအုံးနော်. အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
Windows7မှာ Alpha Zaw-gyi မ ပေါ်ဘူး။ လုပ်ကြပါဦး ။ :77:
alpha zawyi 2008 နဲ. ရ ပါ တယ်
themeေပြာင်း ရင် ပြန် install လုပ် ပါ
windows7နဲ့ Alpha zawgyi 2008 အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ
alpha zawgyi version3နဲ့ဆိုအေးဆေးပဲ
last night i also face with that problem, what happen i dont know yet,:39:
i used windows7ultimate, but i used near2months, never happened,
i used zaw gyi 2008
pls somebody try to solve that problem....
please download keyboard from
the problem is that, we can view the font, but we cant type. I never use win7, so i didnt know this problem. but today i ran into two pc of win7 and both doesnt work with keymap. the keymap shows empty.. any help out there. zawgyi.net doesnt have any update about win7. Do they?
Is there anyone can help my problem? I can read mm font in my laptop but can't type mm font . I am really sick of trying that many times . Please help me out!
ိAlice ရေ ...
Windows7မှာ မြန်မာစာလုံးဖတ်လို့ရနေတာက Alice စက်ထဲမှာ zawgyi font ရှိနေတာမို့ပါ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာစာလုံးရေးလို့မရဖြစ်နေတာက စက်ထဲမှာ zawgyi keyboard မရှိလို့ပါ။
Alice ရဲ့ Windows7က 32 bit version ဆိုရင်
http://www.mandalayalpha.com/ ကို သွားပြီး Version 1.0.0.11 ကို download ယူပါ။
Alice စက်မှာ install လုပ်ပါ။
restart လုပ်ပြီးတဲ့အခါ မြန်မာစာလုံး ရေးလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ 64 bit version ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်
မှာ download ယူပြီး setup.exe ဖိုင်လေးကို run ပေးလိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် မြန်မာ blog အများစုမှာ zawgyi font 2009 version ကို သုံးပြီး ရေးထားကြတာမို့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ zawgyi font က အရင် version ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် စာလုံးတွေကို ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ zawgyi font 2009 version ကို လိုချင်ရင်
မှာ download ယူပြီး မိမိစက်ရဲ့ font folder မှာ ထည့်သွင်းပါ။
ဒီမှာပဲ ထပ်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့ ပြဿနာလေးကိုပါ။
အရင်က ကျွန်တော့ Window7ထဲက Folder တွေကို နာမည်ပေးတော့ ဇော်ဂျီနဲ ့ပေးထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Explorer ထဲမှာပါ မြန်မာလိုပေါ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁နေ့Window Update တင်ပြီးလို့စက်ကို Restart ပေးပြီးပြန်တက်လာတော့ Folder Name တွေက မြန်မာလိုမပေါ်တော့ပါဘူး
လေးထောင့်တုန်းတွေနဲ ့ပဲပေါ်နေတာ့လို့ဘယ်လို ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပေးကျပါဦး။
Desktop ရဲ့ လွတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာ right click --> Personalize --> Window Color and Appearance --> Advanced appearance settings .. --> Advanced --> Item : မှာ Icon --> Font : မှာ zawgyi-one --> Ok --> Ok ဆို ရပါပြီ။
ကျေးဇူး အထူး အထူး (အထူး)x ၁သိန်း တင်ရှိကြောင်းပါ ကို အိတ်ချ် ရေး ရေ:redface::redface::redface:
Control Panel >> Regions and Languages >> Keyboards >> Settings
အဲ့ကိုရောက်ရင် Add ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် United States ထဲမှာပဲ Alpha Zawgyi ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါ.... မြန်မာလို့ရသွားပါပြီ။
64 Bit ဆိုရင် ဘယ် Window တင်ထားတင်ထား Zaw_ gyi ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး
အထက်က post # 13 မှာ ရေးထားတာရှိပါတယ်။
ညီမငယ် သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ်လေး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ကျွန်တော့် Windows က764 Bit ပါ ... ဇော်ဂျီရပါတယ်။ သုံးရတာလဲအဆင်ပြေပါတယ်. ကို xray ပေးထားတဲ့ Link မှာသွားဒေါင်းလိုက်ပါ။ Zawgyi Keyboard L က 64 bit Windows တွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်.
ကျေးဇူး ၊ နောက်ပြတ်သနာတော့နောက်တနေရာမှာအကူအညီတောင်းပါမယ်။
ဒီ http://www.alpha.com.mm/downloads.php ကနေ Alpha Zawgyi Blogging day version ကို Download ပြီး Install ကြည့်ပါ
Start Menu ရှိတဲ့ Task Bar ညာဘက်ထောင့် နာရီ ရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးက Language Icon လေးကို Right Click =>Setting
ပြီးရင် General Tab အောက်က Add ဆိုတာကိုနှိပ် ပြီးရင် u လို့ ရိုက်လိုက် English (United States) ရဲ့ထဲက Keyboard အောက်မှာ Alpha Zawgyi ဆိုတာ ရှိတယ် အဲဒါကို Mark လုပ်ပေးကြည့်ပါ ။
General Tab အောက်က Add ဆိုတာကိုနှိပ် ပြီးရင် u လို့ ရိုက်လိုက် English (United States) ရဲ့ထဲက Keyboard အောက်မှာ Alpha Zawgyi ဆိုတာ ရှိတယ် အဲဒါကို Mark လုပ်ပေးကြည့်ပါ ။
window7 home premiun 64 bit အဆင်ပြေသွားပါတယ်....ကျေးဇူးအထူးပါ
I am using window7 64 bit also.
Zawgyi_Keyboard_L is so good .
Now I also ok for using gtalkMyanmar font.
icon named with zawgyi font will use to be unreadable if you change desktop theme.
Thanks Brother X Ray, The file you give for 64 bit is really works for me. Great Help
I have the same problem as Alice. I use window7ultimate 64 bit, I can download zawgyi keyboard L. But I can't open that downloaded file. the notice ' Application not found' appeared. what's wrong with my laptop ? pls someone answer me.
@mary , try to re download at https://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/downloads/detail?name=zawgyi-keyboard-layout-l.zip&can=2&q=#makechanges
thanks ok bar b...
facebook မှာ မြန်မာလို မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ တစ်ချက်လောက် ကျေးဇူးပြုပြီး
@chitkoko which browser are you using ? You need to change browser default font.
for chrome , go to setting . Search font. Click customize font. Change the font that you want.
for firefox, in the firefox Preference , Go to Content and change the font.